Ungqongqoshe ufanise "abebehlukumeza" uzakwabo nemigodoyi - Ilanga News
Home Impilo Ungqongqoshe ufanise “abebehlukumeza” uzakwabo nemigodoyi
Ushone esatshiswa obeyisikhulu sezemfundo KwaZulu-Natal
UNGQONGQOSHE wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mshengu ekhuluma enkonzweni yokuphelezela obeyinhloko yomnyango, uDkt Enoch Nzama. IZITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA
IHLUKUMEZE izikhulu zezemfundo eyokuthunyelelwa imiqhafazo esabisayo kobeyinhloko yoMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uDkt Enoch Nzama (65), othunwe izolo ngoMgqibelo. Lokhu kuvezwe nguNobhala weSouth African Democratic Teachers Union (Sadtu), KwaZulu-Natal, uNkz Nomarashiya Caluza, enkonzweni yokuphelezela uDkt Nzama ebiseBethsaida Ministries International, ePhoenix, eThekwini. UNkz Caluza uthi nangesikhathi uDkt Nzama egula, ibisalokhu ingena imiqhafazo engemihle ebiphazamisa impilo yakhe.
“UDkt Nzama ngesikhathi eqokelwa kulesi sikhundla ngo-2016, sakhipha isitatimende sokumamukela egameni leSadtu, simbongela ngomsebenzi omusha ayephathiswe wona, kwaba nezinkulumo ezithi sikwenzeleni lokho, kwafika nemilayezo eyayigxeka. “Sasingemukeli yena siqu sakhe, kodwa sasemukela umsebenzi ayewunikiwe njengoba senza nakwabanye uma beqokelwa ezi khundleni. Bezifika izikhathi ezinhle nezimbi zokuxabana kwethu noDkt Nzama uma siqhathwa wumsebenzi. “Thina siyiSadtu besilwela ukuthi ukufunda nokufundisa kuhambe kahle esifundazweni, kukhiqizwe okusezingeni eliphezulu ngoba siyinyunyana enkulu, enamalungu amaningi, uma u-HOD engaxhumani nathi ngendlela efanele, izolimala imfundo.
“Nangesikhathi egula uDkt Nzama sikwazile ukumbona, siyohlola isimo sakhe, kwathi ngoNhlolanja (February), sayokhuluma naye ubuso nobuso emzini wakhe. Waze wabonga ukumeseka kwethu, wathi ukulwa naye ebesikwenza kumphonsele inselelo ukuze umnyango ube kuleli zinga alishiye kuwona. “Sikubonile ukusebenza kwakhe esusa imiphumela kamatikuletsheni ku-60% wayibeka ku-80%,” kusho uNkz Caluza. Uthe bebewumndeni nabakwaNzama ngoba bebefonela ngisho mkaNzama, uNkk Duduzile uMaShusha, uma bengayitholi inhloko ocingweni.
UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala, ugxeke ukulwa ngokwepolitiki ukupha-zamisa ukusebenza eminyangweni kahulumeni. Uwancomile amagalelo kaDkt Nzama. Ngakolunye uhlangothi, uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mshengu, uhlabe wahlikiza abangakhulumanga kahle ezinkundleni zokuxhumana ngoDkt Nzama ngesikhathi sekuzwakele izindaba zokudlula kwakhe emhlabeni. “Abebenza lokhu (kokungabi nazwelo) bangikhumbuze inkulumo eyake yashiwo nguMnu Thabo Mbeki lapho afanisa khona abathile nemigodoyi,” kusho uMnu Mshengu.
Uqale waxolisa kundunankulu wesifundazwe ngokukhuluma la magama aqinile. UDkt Nzama ushone ngeledlule. Washiya emnyangweni ngenxa yokugula ngoNtulikazi (July), ekubeni kwasekuvele kufanele athathe umhlalaphansi ngoMandulo (September) nyakenye. Waze wabanjelwa nguDkt Barney Mthembu.Waqala ukufundisa ngo-1983, oHlange High School, waba nguthishanhloko e-Uyikhulu Ndwandwe ngo-1986, wadlulela eLihlithemba High, eNdwedwe ngo-1987, eSivananda Technical High, KwaMashu, nasekolishi
yakhona ngo-1993. Ngo-1997 waba yiDeputy Chief Education Specialist.
Previous articleIntukuthelo kugugulwa amathuna awu-11
Next articleBuningi ububi bokuvusa induku ngomjovo